कोरोना जितेका बेलायतका नेपाली डाक्टर के भन्छन्? – Nepalilink
कोरोना जितेका बेलायतका नेपाली डाक्टर के भन्छन्?
कोरोना भाइरस संक्रमण भएका बिरामीहरु हेर्ने क्रममा आफै संक्रमित बनेका डा सर्जु श्रेष्ठ निको भएर फेरि काममा फर्किसकेका छन् ।
लण्डन । बेलायतको सन्डरल्याण्ड अस्पतालमा ‘कन्सल्टेन्ट फिजिसियन’ एवम् मृगौला रोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत छन् डा सर्जु श्रेष्ठ । अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका बिरामीहरु हेर्ने क्रममा आफै संक्रमित बनेका उनी अहिले भने निको भएर फेरि काममा फर्किसकेका छन् ।
मार्चको आधाआधी थियो । बेलायतमा कोरोनाका केसहरु बढ्दै गएको भएपनि महामारी नै भइसकेको थिएन । डा श्रेष्ठ कार्यरत सन्डरल्याण्ड अस्पतालमा पनि कोरोनाका एकदुई वटा केस मात्रै थिए त्यतिञ्जेल ।
‘हामी त मास्क र पञ्जा मात्र लगाएर बिरामी हेरिरहेका थियौं । अस्पतालमा पिपिईहरु उपलब्ध थिए,तर पनि पनि सबै प्रयोग गरेका थिएनौं, डा श्रेष्ठ सम्झिन्छन्, ‘मलाई पनि तीनै बिरामीसंगकै सम्पर्कले संक्रमण भयो भन्ने लागेको छ ।’
सुरुको दुई दिन पखाला भयो, उनले सामान्य रुपमै लिए । तेस्रो दिनदेखि ज्वरो पनि थपियो । ज्वरो निकै चर्को बन्दै गएपछि मनमा बिस्तारै चिसो पस्न थाल्यो । पखाला र ज्वरोपछि खोकी पनि सुरु भयो । तर श्वासप्रश्वासमा कुनै समस्या थिएन ।
हुन त त्यतिबेलासम्म पखालालाई कोरोनाको लक्षणका रुपमा लिइएको थिएन । तर कोरोना संक्रमित केहि बिरामीहरु हेरिसकेका डा श्रेष्ठलाई आफ्ना लक्षणहरु राम्रो सकेंत होइन भनेर बुझ्न कठिनाइ भएन ।
‘अहिलेसम्म जिन्दगीमा कहिल्यै बिरामी नपरेको मान्छे म । तेस्रो दिनसम्म आउँदा त यति धेरै कमजोर बनें कि बाथरुम नै जान पनि धौधौ भयो’, उमेरले ५ दशक काटेका डा श्रेष्ठले सुनाए, ‘साँच्चीकै भन्दा मैले जीवनमै पहिलोपटक मृत्युको बारेमा सोंच्न पुगें । मेरो आँखै अगाडि मेरो जस्तै लक्षणहरु बिग्रिएर ‘आइसियू’मा सारिएका ‘कोभिड’ बिरामीहरुको अनुहार झल्झली आइरह्यो ।’
श्वासप्रश्वासमा समस्या नआइञ्जेल अस्पतालले भर्ना लिंदैनन् भन्ने डा श्रेष्ठलाई थाहा थियो । ‘सिटामोल’को सहारामा घरमै बस्नुको विकल्प थिएन । श्रीमतीले तातो, झोलिलो र पचाउन सजिलो हुने खालका खानेकुरा, फलफूल, जुस आदि खुवाइरहेकी थिइन् । एक छोरा र एक छोरीसहितको श्रेष्ठ परिवारमा सबैजना एकअर्काबाट ‘आइसोलेट’ हुनुपर्ने भयो, जसकारण अवस्था झन् अफ्ठेरो बन्यो ।
लक्षणहरु सुरु भएको तेस्रो र चौंथो दिन डा श्रेष्ठलाई निकै गाह्रो भयो । ‘म त यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको थिएं कि पहिलोपटक ‘लाइफ इन्सोरेन्स’का बारेमा समेत परिवारलाई बताएँ । मेरो कुरा सुनेर उनीहरु पनि झन् डराउँदै गएका थिए’, डा श्रेष्ठले भने, ‘पाँचौं दिनबाट मलाई ज्वरोले छोड्यो । अनि बिस्तारै सुधार महसुस हुन थाल्यो ।’
यसबीचमा डा श्रेष्ठकी श्रीमतीलाई समेत हल्का ज्वरो र खोकीको लक्षण देखिएको थियो । केहि दिनभित्रै दुवैले जाँच गराए, डा श्रेष्ठको रिपोर्ट ‘पोजिटिभ’ आयो तर श्रीमतीको ‘नेगेटिभ’ ।
बेलायतमै २० वर्ष काम गरेका डा श्रेष्ठका लागि ‘फ्लु’का केस नौलो होइनन् । यसअघि ‘स्वाइन फ्लु’, ‘बर्ड फ्लु’ सम्मका बिरामी हेरेको अनुभव संगालेका उनलाई कोरोनाको केस भने सबैबाट फरक र अझै धेरै खतरनाक लागेको छ ।
‘अहिलेसम्म कोरोनाको उपचार सम्भव छैन, कुनै औषधि पनि बनेको छैन’, सबैलाई उनको सुझाव छ , ‘सरकारले जारी गरेको ‘सोसल डिस्टेन्सिङ’को नियम पालना गरौं । नियमति हात धुने गरौं । शरीरमा पानीको कम हुन नदिऔं, स्वस्थकर खानेकुराहरु खाने गरौं । सावधानी नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । कुनै लापरवाही नगरौं ।’
डा श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यलाभ गर्ने क्रममा परिवारबाट निकै ठूलो साथ मिल्यो, विशेष त मनोवैज्ञानिक हिसाबले । ‘यो बेलामा मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि मानिसलाई ठूलो सहयोगको खाँचो हुन्छ । जुन कुरा परिवारले बुझिदिनु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘मेरो परिवार र श्रीमतीको सहयोगकै कारण पनि आफू छिटै निको भएंजस्तो मलाई लागेको छ ।’
गत सातादेखि फेरि आफ्नो नियमति काममा फर्किएका छन् उनी । अहिले त अस्पताल पनि कोरोना संक्रमितहरुले भरिभराउ छ । झण्डै ८० प्रतिशत बिरामी कोरोनाकै छन् । कोरोनाको संक्रमणबाट निको हुन नपाउँदै फेरि तीनै बिरामीहरुकै सम्पर्कमा पुगेका उनलाई कुनै डर भने छैन, ‘मलाई त निको भइसक्यो । मेरो शरीरमा जुन ‘एन्टीवडी’ पैदा भएर मलाई निको भयो, त्यसले नै अब मलाई फेरि संक्रमित हुने जोखिम कम गरेको छ जस्तो लाग्छ । पहिलेको तुलनामा ‘पिपिई’को प्रयोग पनि बढाइएको छ ।’
कोरोनाको संक्रमण हुँदै निको हुने बेलासम्मको अनुभव डा श्रेष्ठलाई जति धेरै कष्टकर भयो, त्यति नै महत्वपुर्ण पाठ सिक्ने अवसर पनि ।’जीवनको महत्व अझै बढि बुझेंजस्तो लागेको छ । आजका दिनसम्म आफुले गरेका कामहरु पनि कति ठीक थिए, कति बेठीक थिए भन्ने आत्ममुल्यांकन हुँदोरहेछ’, डा श्रेष्ठले थपे, ‘सबैभन्दा बढि महत्वपुर्ण कुरा त अब जीवनलाई त्यत्तिकै खेर फाल्ने होइन, झन् झन् राम्रा कामहरुमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा भित्रैदेखि महसुस भएको छ ।’-अन्नपूर्ण पोष्ट